Izinkondlo zika-Mashi 8 ezinganeni - umama, ugogo, inkulisa. Izinkondlo zezingane ezincane zika-Mashi 8 zezingane zesikole
Okunye Siyakuhalalisela Siyakuhalalisela ngoMashi 8
Amavesi amahle amazingane kaMashi 8 ngamama nogogo
On Day International Women's Day abesifazane abathandekayo badunyiswa hhayi kuphela amadoda amancane namadoda asekhulile, kodwa futhi izingane. Izingane ezivela enkulisa kanye nabafundi besikole esincane kumele zifunde izinkondlo ngoMashi 8 ngoomama nogogo, zilethe izimbali ezintsha zentwasahlobo nezipho ezincane, ezenziwe, ngokuvamile ngezandla zabo. Ukwamukela izipho ezinjalo kanye nezibonakaliso zokunakwa ezivela kubafundi abancane nabantwana abathandekayo kubesifazane kuyamnandi kakhulu, futhi bajabule njalo ngenkondlo elula kunazo zonke kusukela ngo-Mashi 8, efundwa yinyane elivela enkulisa noma ingane yesikole ibhala ekhadini lokuzalwa.
Izinkondlo March 8 for izingane ezincane
Uma ufuna ingane eneminyaka engu-3-4 ubudala ukufunda amavesi ngawe ngo-Mashi 8, khetha kuye umsebenzi ohlelekile we-quatrains ka-1-2. Le mibhalo yombhalo kulula ukuba ingane ibone, masikhumbule futhi uyakwazi ukuyilobela ngezwi emndenini womndeni noma phambi kwezivakashi nezihlobo eziseduze. Kusadingeka ukucacisa izinkondlo ezinde kakhulu ezinganeni ezincane kakhulu, ngakho-ke akufanele 'ziguqulwe'. Ngaphezu kwalokho, kubaluleke kakhulu ukukholisa indodana noma indodakazi ukuthi ingesabi ukukhuluma phambi komphakathi futhi ifunde amavesi ngokuzwakalayo.
Angizange ngikhale usuku lonke, angizange ngiyidonse inja. Angiyona i-prankster: iholidi lomama.
Umama - ilanga, imbali, umama - umoya we-sips, umama - injabulo, Mama uhleke, omama bethu bangcono kakhulu
Nginike umama isipho. Ngilungiselela okuhle kakhulu, ngimemeza endlebeni yakhe: "Mama! Ngiyakuthanda! "
Ngizokhipha umama wami othandekayo ama-tulips amathathu. Ngomhlaka lwesishiyagalombili ka-Mashi, endaweni ehamba emhlophe, iNtaba iyiswidi lonke, i-hill of chocolates. Ukwenza usuku lwentwasahlobo lucacile, luhlanzekile futhi lumnandi.
Ukuthinta amavesi ngo-Mashi 8, umama
Iholide lesikhuphukazi labesifazane liyisikhathi esimangalisayo sokuba wonke umntwana abonge umama wakhe ngesisa, ukunakekelwa nokukhathalela nokuveza izifiso zakhe ezinhle, ezifudumele neziphefumlelwe. Izinkondlo ezinhle ngo-Mashi 8 zingafundiswa ngenhliziyo futhi zifunde umama ngokuzwakalayo ekuseni ngeholide noma ubhale ngesandla ekhadini leposi elihle. Umama uyakwazisa ukubonakaliswa okunjalo kwengane yakhe futhi uzobonga kakhulu ngamazwi akhe aqotho nezifiso ezijabulisayo.
Embizeni ngizohlwanyela ihlumela, ngizoyibeka efasiteleni. Kunalokho, ihlumela, Vula imbali - ngiyakudinga ngempela. Imimoya eqhuma ngaphandle kwefasitela Ngobusika obusika, Kodwa kuyoba ngaphezulu Nsuku zonke, Rusty, imbali yami. Lapho, ngokusho kwekhalenda le-Spring, isikhathi sizofika, Ngomhlaka lwesishiyagalombili kaMashi ngizokwenza umama ube yimbali!
Ngingomhla ka-Mashi 8th Blue - eluhlaza okwesibhakabhaka ngizokudonsa umama ngezimbali zeholide. Okokuqala - kusuka kuma-violets, Emikhaleni yemifino eyesibili, Nezimbali ze-Nezhen eziqhakaza njengentwasahlobo.
Ekuseni - ngoMashi 8, ngizohlabelela ingoma kuMama. Umama othandekayo wami: Yazi ukuthi ngiyakuthanda, ukuthi ngizolalela ngaso sonke isikhathi, angisoze ngicasula, ngizogeza zonke izitsha, Futhi ngizokujabulisa.
Amathandekazi omama, iholidi elijabulisayo! Unamehlo enhle, anomusa. Yiba njalo ujabule, smile smile. Ngiyakuthanda kakhulu. Uhle kakhulu! Nginomomotheka wakho, Mama, ngithanda kakhulu, Futhi ngomhla ka-8 kuMashi nginikeza zonke izimbali. Yeka ukuthi iqhude lasekuseni ekuseni lizovuka kanjani, ngizofunda lokhu ukuhalalisela ngawe.
Izinkondlo zengqondo nokufudumele ngoMashi 8 ugogo
Amavesi angokomqondo kusukela ngoMashi 8
Esikhathini Sosuku Lwabesifazane Yomhlaba Wonke kubaluleke kakhulu ukugubha iholidi ukuthi ungakhohlwa ukuhalalisela ugogo wakho othandekayo. Phela, zihlala zizungeze ukunakekelwa okufudumayo nangokweqile kunayo yonke, ziqaphele futhi zivame ukunikeza izizukulwane zabanikazi bazo izipho nezinhlobonhlobo zezidlo ezihlukahlukene zokuzilungiselela. Izinkondlo zikagogo ngo-Mashi 8 kufanele zibe ziqotho futhi zithinta, ngakho-ke owesifazane osekhulile wazi kahle ukuthi isizukulwane sakhe esincane siyakuthanda kangakanani nokuthi siyathandwa kangakanani futhi sihlonishwa emndenini. Ungabhala isifiso esihle neside eside esinezintandokazi ngekhefu lentwasahlobo ephepheni lekhadi elihle, futhi inkondlo encane, emfushane kakhulu ngosizo lwezobuchwepheshe zamuva zokunyathelisa izithombe zifaka ikhi lesipho. Isipho esinjalo, nakanjani, siyoba mnandi futhi siyohlale sikhumbuza abazukulu abathandekayo, abanakekelayo nabothando.
Izinkondlo ezinhle ngoMashi 8 izingane zesikole
Izinkondlo ezinhle kusukela ngo-Mashi 8
Ngisho nasemakilasini omncinyane kunazo zonke, izingane zikwazi ukukhumbula ngekhanda inani elikhulu lencwadi ngenhliziyo, ngakho-ke leli qembu lobudala ungathatha izinkondlo ngo-Mashi 8, ezinama-quatrains angu-5-6. Futhi kufanele ulalelisise imisebenzi enemibuzo evela ezincwadini zakudala, enikezelwe entwasahlobo yasentwasahlobo. Bathi, njengoba, ngempela, izinkondlo zabalobi banamuhla, kufanelekile ukubhala ephephandabeni elidabukisayo lendabuko esikoleni noma ukufunda emkhosini wokugubha eklasini. Futhi abazali, othisha futhi bamemele izivakashi bazojabula kakhulu ukuzwa behalalisela ngoMashi 8 evesini abavela esikoleni.
Siyakuhalalisela ngoMashi 8 uzothola lapha .
Amavesi anomusa futhi anomusa ngoMashi 8 enkulisa
Amavesi amahle kusuka ngo-Mashi 8
Usuku lwabesifazane lwaMazwe ngamazwe luhlale lugujwa kakhulu futhi hhayi kuphela kumabhizinisi amakhulu, emahhovisi amakhulu kanye nezinhlangano eziqinile. E-kindergartens, futhi, banemikhosi ekhanyayo futhi ejabule, lapho izingane zifunda khona izinkondlo ngoMashi 8 kubafundisi, omama, ugogo, odade nezinye izivakashi, ukudlala imidwebo elula yokudlala, ukucula nokudansa. Ngamaholidi anjalo amahle kuncono ukukhetha ama-quatrains alula, kulula ukubuka kwengane. Kule minyaka yobudala, izingane azikwazi ukufunda izikhulu kakhulu, imisebenzi emikhulu, izinkondlo ezide kakhulu zingahlukaniswa zibe yizingxenye, ukuze zilandwe eziningana ngokuphenduka. Abazali bayojabula kakhulu ukubona ingane yabo esiteji noma phakathi kwehholo elihle futhi uzwe izinkondlo zakhe kusukela ngo-Mashi 8.
Izinkondlo zezingane zikaMashi 8
Izithombe ezinhle nezinhle kusuka ngoMashi 8, 2018
Siyakuhalalisela ngoMashi 8
Izingoma ngo-Mashi 8 kumama, ugogo - ngamantombazane, izingane, intsha - izingoma zesimanje nezengane - Izingoma ezinhle ngo-Mashi 8 ngamazwi namagama
Siyakuhalalisela ugogo kusukela ngo-Mashi 8
Siyakuhalalisela uthisha ngoMashi 8
Siyakuhalalisela umama ngo-Mashi 8
Imikhuba ngaphambi kokulala, kusiza ukubona amaphupho-izambulo
Ama-Makeup Lipstick Ebomvu
Izithameli zaseFrance ezidumile
Izikhumbi ezibhaka nepeyari
Indlela yesilisa ebuhle besifazane
Impilo yezilwane ezifuywayo
Indlela yokuziphathisa owesifazane lapho uhlangana nendoda
Uthando olunesihluku nesithandwa soshushiso
Indlela yokunakekela amakati amadala
Indlela yokunqoba inhliziyo yomuntu - Cancer
Amabhisi eshizi ngamagilebhisi
Kungani indoda ingavumi ukuhlubuka?